I-Thunderbird 5, ekugcineni iyatholakala | Kusuka kuLinux
I-Thunderbird 5, ekugcineni iyatholakala
Ezinsukwini nje ezimbalwa kukhishwe iFirefox 5, sekukhishwe inguqulo entsha yeklayenti le-imeyili elingcono kakhulu le-Open Source. Lena inguqulo 5. Yebo, inguqulo 5; bekungekho nguqulo yesi-4 ngoba iMozilla ifuna ukuthi isiphequluli kanye neklayenti le-imeyili baphathe izinombolo ezifanayo kusukela manje.
Le nguqulo entsha iza nemenenja entsha yokwengeza, njengaleyo yeFirefox, ibuye ithuthukise ukuhlanganiswa neNotifyOSD, amathebhu angahlelwa kabusha, ngisho nakumawindi amasha.
Isilekeleli sokudala i-akhawunti naso senziwe ngcono, ukuthuthukiswa kwesixhumi esibonakalayo nokulungiswa kwamaphutha okuningi. Ngokusobala siyabona, nezwi, the khipha amanothi.
Impendulo engcono futhi esheshayo yokuqala nokuyisebenzisa.
Usebenzisa injini yeMozilla Gecko 5
Umphathi wama-plugins amasha.
Ukuthuthuka kusilekeleli sokudala i-akhawunti.
Okunamathiselwe manje kukhombisa imininingwane yosayizi walokho okunamathiselwe eduze kwabo.
Ama-plugins angalayishwa kuzifunzo ze-RSS ngokwakhona.
Kusuka kwakhe Isikhungo sokulanda singalanda isifaki noma ama-binaries we-Linux. Endabeni yokwabiwa ngokusekelwa kokugcina kwe-PPA (Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04), Abantu baseMozilla banamaphakeji abo aselungile, vele ungeze indawo yokugcina bese ufaka. Impela okunye ukusabalalisa kuzobuyekeza amaphakheji abo, ngakho-ke kungakuhle ukuthi ulinde amahora ambalwa ukuze ubuyekezwe.
Uma kunesidingo, amaphakethe olimi angalandwa ku-ftp:
I-PPA futhi inenguqulo yombani ebuyekeziwe, iMenenja yeKhalenda, ekuBeta 4 kepha kunjalo uzinzile ngokwanele.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » I-Thunderbird 5, ekugcineni iyatholakala
Kuzwakala izindaba ezinhle kakhulu kimi. Sizobona ukuthi iyahambisana yini ne-OpenSUSE yami. Ngiyabonga.
UJuan Sanchez kusho
Futhi ulushintsha kanjani ulimi uma usululandile?
Phendula uJuan Sanchez